२५ फाल्गुन, २०७५ शीतलपाटीन्युज डटकम। 45415
डराउँदा डराउँदै सकिन्छ जागिर
जागिरे जीवनमा ‘डर’ एउटा सधैँ साथ रहने साथी रहेछ । झण्डै २३ वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेँ । फर्किएर पाउँछु तलब खाएँ, लुगा लाएँ, रासन पाएँ, ड्युटी गरेँ, कहिले यसै जागिरका कारण विदेश पुगेँ, पदको आधारमा प्राप्त हुने सुविधा लिएँ । दुःख–सुखका थुप्रै पलहरूबाट गुज्रिएँ । कतिलाई मद्दत गरेँ । कतिको मद्दत पनि पाएँ । सलाम खाएँ । सलाम गरेँ । चाकडी पाएँ । चाकडी गरेँ । गाली गरेँ । गाली खाएँ । ग्रेड थपको पत्र पाएँ । ग्रेड रोकेको पत्र पनि पाएँ । यी २३ वर्षभित्र के के भो के के ? अनगिन्ती उतारचढाव आए । यसमध्ये निरन्तर एउटा कुराले भने सधैँ पछ्याइरह्यो, त्यो थियो– ‘डर’ । जागिर र डर सँगसँगै जाँदोरहेछ । त्यहाँभित्र अनेकौँ डरले सताइरह्यो । पहिला इन्स्पेक्टरमा जाँच दिँदा अप्स्टेकल, मेडिकल वा लिखीत मै फेल भइएला भन्ने डर, त्यसमा पास भयो इन्टरभ्यूमा फेल भइएला भन्ने डर । कस्ता कस्ता प्रश्न सोधिएलान् ? भनी कल्पना मै डर । पास भइयो फेरि तालिम पास हुने हो या नहुने हो अर्को डर । तालिममा थोरै नम्बर आउलाकी भन्ने डर । पास भइयो परेड बिग्रेलाकी, हिँड्दा खुट्टो र हात बिग्रेलाकी भन्ने डर ।
पास भएर जागिरमा ज्वाइन गरियो हाकिमको डर । काम गर्दा चुकिएला भनी कानुनको डर । तिनताका पुलिस अफिसरहरू रेष्टुरेन्ट आदिमा जाँदा पनि डराई डराई जाथ्यौँ । आइजिपी परिवर्तन हुँदा पनि डर, हाकिम परिवर्तन हुँदा पनि डर । तिनताका विटिङ र रिटिङ भन्ने भव्य कार्यक्रम हुन्थ्यो । त्यसमा त डरैडर । घरमा आउँदा अफिसमा खोजेकी भन्ने डर । हाकिमको मप्रतिको दृष्टिकोण के छ भनी अर्को डर । मूल्याङ्कनमा कम नम्बर दिने हुन्की वा तालिममा पछि परी पदोन्नतीमा बाधा पर्लाकी भनी अर्को डर । प्रत्येक सरुवाका लिस्टसँगै डर । प्रत्येक वढुवाका लिस्टसँगै डर । प्रत्येक घटनासँग डर । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँग डर । जालझेल गर्नेहरूबाट डर । प्रतिस्पर्धामा आफ्नै मित्रहरूद्वारा हुने छलकपटको डर । सरुवा भए राम्रो ठाउँमा परियो कि परिएन ? बढुवा भए कति नम्बरमा बढुवा भयो ? यसमै चिन्ता यसमै डर । ३० वर्षे लाग्ने कल्पना मात्रले पनि डर । पदावधि लाग्ने अर्को डर । कमाउन सकिएन भन्ने डर । कमाउनेलाई लुकाउने कुरामा पनि डर । अन्तमा अवकाश । अब जागिर छैन कसरी दिन बिताउने भन्ने अर्को नयाँ डर ।
जागिरे जीवनमा दुःख–सुख आउने जाने गरी रहँदारहेछन् तर डरचाहिँ साथै हुँदो रहेछ । जागिरेहरू डरबीच कति बोल्ड निर्णय गर्न सक्तछन् भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुने गर्दछ । कोही केबल जागिर मात्र खाऊँ, त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा भोगौँ, परिवार पालौँ भन्ने खालका हुन्छन् । उनीहरू काममा कुनै जोखिम लिन चाहँदैनन् । यस्ता मानिसहरू अनुशासित देखिन्छन् तर अनुत्पादक हुन्छन् । यस्ता मानिसहरूको जागिरे जीवनमा धेरै डर हुँदैन किनकी उनीहरूले कुनै जोखिम लिएकै हुँदैनन् । अर्कोथरी कर्मचारी हुन्छन् जो जागिरबाट धन, ऐश्वर्य कमाउन चाहन्छन् । यस्ता कर्मचारीहरू राजनीतिक व्यक्ति र आफ्ना संगठनमा गुट बनाई सेटिङपूर्वक काम गर्दछन् । यिनीहरू धन प्राप्ति गर्ने कुरामा निर्णय गर्न डराउँदैनन् । रचनात्मक काम नगरे पनि मानिस ठाउँ–ठाउँमा राखी सेटिङ गरेका कारण उनीहरू निडर हुन्छन् । अर्कोथरी क्यारियर कन्सस हुन्छन् । उनीहरू खाली मेरो क्यारियर बिग्रेला भनी डराउँदछन् । हाकिमलाई खुशी पार्ने काममा मात्र उनीहरूको ध्यान हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू हरेक काम डराई–डराई गर्दछन् र निर्णय क्षमता एकदमै कम हुन्छ । हरेक काममा हेरौँला, विचार गरौँला भनी काम अड्काउँछन् । अर्का हुन्छन् रचनात्मक । जो आफ्नो पदको सदुपयोग गरी देश–समाजलाई नयाँ योगदान दिन चाहन्छन् । आफ्नो नाम राख्न चाहन्छन् । अरूभन्दा अलग देखाउन चाहन्छन् । यस्ता कर्मचारीले सबैभन्दा बढी डर र दुःख पाउँछन् । सरुवा, बढुवा हरेक काममा यिनले अरूभन्दा बढी कष्ट बेहोर्नु पर्दछ । यिनलाई आफ्नै अन्य निस्क्रिय र सेटिङ गरी अर्थ लाभ गर्ने साथीहरूले पनि पटक्कै मन पराउँदैनन् र यो बढ्ता छ भन्छन् । यस्ता व्यक्ति निडर र प्रष्ट हुन्छन् । त्यसैले समाजमा लोकप्रिय भए पनि संगठनभित्र यिनलाई पछि पार्न प्रयास भइरहेको हुन्छ । हाकिमहरू यिनीहरूसँग भित्रीरूपमा डराइरहेका हुन्छन् त्यसैले गोप्य काममा यस्ता कर्मचारी संलग्न गर्दैनन् । यी समूहलाई भित्रैका हाकिम साथीबाट डरमा पारिएको हुन्छ ।
चाहे मैले माथि वर्णन गरेका जुन वर्ग वा प्रकारका कर्मचारी किन नहुन् ‘डर’ उनीहरूको जागिरभर साथै रहने गर्दछ । जागिर अघि वा जागिर पछिको समयभन्दा बढी । त्यसैले भनिन्छ ‘डराएर जागिर खाउ’ । म यो बुझ्दिन डराएको मानिसले जागिर लामो खाला तर देश समाजलाई दिन्छ के त ? आज तल्लो पियनदेखि माथिल्लो मुख्यसचिवसम्म र सुरक्षा फौजमा तल्लो तहदेखि माथिसम्म डरबीच कर्मचारी बाँचेका छन् । डरले कर्मचारीलाई भित्रबाटै कमजोर बनाइरहेको छ । उनीहरू आफुमूनिका मानिसहरू सामु निक्कै निडर भएको देखाउँछन् तापनि वास्तविकता बाहिर देखाएजस्तो हुँदैन । धेरै प्रतिशत कर्मचारीको डराउँदा डराउँदै सकिन्छ जागिर ।
what is impotence - erectile dysfunction medicine online ed meds
use paypal to buy cialis tadalafil ( cialis ) cialis on line paypal payment
woman takes viagra does the government pay for viagra viagra 20mg
buying viagra online reviews does the government fund viagra how to enhance viagra effects
research paper editing - custom order essays pay for dissertation
help with thesis - how long should an annotated bibliography be best website for writing essays
finasteride coupon - http://finasteridepls.com/ propecia prescription
finasteride online - http://propechl.com/ finasteride propecia
http://essaywriteris.com/ - cheap essay buy write my essay for cheap best writing services buy an essay cheap
https://dissertationahelp.com/ - dissertation assistance service dissertation writing tips dissertation review writing dissertation service
https://ljcialishe.com/ - purchase cialis on line https://cialisvja.com/ - coupon for cialis https://viagraonlinejc.com/ - when to take viagra for best results https://viagratx.com/ - viagra 50mg price https://buycialisxz.com/ - cialis free sample
https://kloviagrli.com/ - natural viagra foods https://vigedon.com/ - viagra daily https://llecialisjaw.com/ - viagra or cialis https://jwcialislrt.com/ - is cialis better than viagra https://jecialisbn.com/ - cialis and alcohol
‘स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ’
Breaking News: कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा